#Hashtags နှင့်ထိရောက်သော #Twitter #Marketing Martech Zone
မဟုတ်ပါ၊ ဤစိတ်ရှုပ်စရာများထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ နောက်လိုက်များထပ်မံရယူပါ သင့်ရဲ့နောက်လိုက်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့သင့်ရဲ့နောက်ကြောင်းကိုအတုလုပ်ဖို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ။ သင်၏နောက်လိုက်မဟုတ်သောသက်ဆိုင်ရာပရိသတ်များမှသင်၏ tweets များကိုတွစ်တာပေါ်တွင်ထိထိရောက်ရောက်ရှာဖွေရန်ဤနည်းသည်သင်၏ Twitter ကိုထိထိရောက်ရောက်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
အဖြေကို hashtag လို့ခေါ်တယ်။ လူများစွာနှင့်အစီအစဉ်များစွာရှိသည် Twitter ကိုရှာဖွေသည် အချိန်မှန်သတင်းများနှင့်ရှာဖွေသည့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ယခုပင်ဖြစ်သည် hashtags ကို.
hashtag ဆိုတာ pound သင်္ကေတ # ဖြစ်ပြီးနောက်ခေါင်းစဉ်ကဘာရေးနေလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမယ့် tag ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးအကြောင်းရေးသားပါကကျွန်ုပ်၏ tweet အတွင်း #economy ကိုရေးသားလိမ့်မည်။ ငါ Indianapolis အကြောင်းရေးနေတယ်ဆိုရင် #indy ဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်ဟာစီးပွားရေးအတွက် Twitter ကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် hashtags ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုဖို့ဆိုတာမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး hashtag ကိုဘယ်သူသုံးတာလဲ။ Twitter ပေါ်က Chris Messina ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဖွဲ့များအတွက် # (pound) အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ခံစားရသနည်း။ ၌ရှိသကဲ့သို့ #ဘားကမ့် [msg]?
- ခရစ်မက်ဆီနာ™ (@chrismessina) သြဂုတ်လ 23, 2007
ဒီနေရာမှာဥပမာတစ်ခု။ ကျနော်တို့ဖြန့်ချိသည့်အခါ WordPress ပုံရိပ် Rotator၎င်းသည်ဖြန့်ချိလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်လိုက်များက၎င်းအကြောင်းကိုဖတ်ရန်ရိုးရှင်းစွာရေးသားနိူင်သည်။
အဲဒီအစားကျနော်တို့ hashtags ကဆက်ပြောသည် #စကားဝှက် နှင့် #ပလပ်ဂင် မက်ဆေ့ခ်ျသို့
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးသတင်းများကို Image Rotator သို့ထည့်ပါ #WordPress #ပလပ်ဂင်! download 78,000 ကျော်! http://t.co/vyDuwSjGsa
- စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ (@martech_zone) စက်တင်ဘာလ 2, 2014
ဒီ hashtags တွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အကောင့်တော်တော်များများကချက်ချင်းကောက်ယူလိုက်ပြီးနောက်ထပ်ရာပေါင်းများစွာကို plugin ရဲ့တပ်ဆင်မှုဆီသို့ ဦး တည်သွားစေပါတယ်။ အိုး၊ ဒါကသက်ဆိုင်ရာနောက်လိုက်တွေကိုရွေးဖို့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းပဲ! 🙂
ဤတွင် Leap မှသမိုင်းနှင့်အသုံးပြုမှုအပေါ်အလွန်ကြီးစွာသော infographic ပါပဲ hashtags ကို လူမှုမီဒီယာ၌တည်၏။
Tags: Chris Messinaပထမ hashtagနံပါတ်အစားအသုံးပြုသောဟက်ရှ်သင်္ကေတစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် hashtaghashtag စျေးကွက်တွစ်တာtwitter မှာ hashtaghashtag ကဘာလဲ
သြဂုတ် 8, 2009 မှာ 1: 50 AM
ငါတို့အသွားအလာအချို့ကိုပို့ပေးပြီးဒေါက်ဂလပ်ကိုချစ်သောအချစ်ကိုပြန့်ပွားစေနိုင်သည်ကိုတွေ့ရ။ ၀ မ်းသာပါသည်။ သင်၏အမှန်တကယ်ဆောင်းပါးကို WPscoop ဆိုက်သို့တင်ပြခြင်းကသင့်ကို ပို၍ ပင်ကူညီလိမ့်မည်။
စက်တင်ဘာ 14, 2009 မှာ 7: 25 AM
ကိုယ့်ရဲ့ e-book ကိုဖတ်မယ်၊ အဆင့် ၂၅ ဆင့် SEO အတွက်ဘလော့လုပ်တယ်။ hash tag ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအမြဲတမ်းတွေးနေတယ်။ ငါ 25 လကျော်တွီတာပေါ်မှာခဲ့ကြရသေးထိုအမှုအရာထွက်နေသေးတယ်ကြပြီမဟုတ်။ အခုငါသိပြီ ယခုငါသူတို့နာမကိုသိ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဇွန် 3, 2011 မှာ 11: 01 pm တွင်
9:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 07 တွင်
လူကြိုက်များသောနည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သော hashtag များစာရင်းကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိပါသလား။ ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပြုပါ
10:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 2, 25
မင်္ဂလာပါ @ yahoo-RTSVY4AEAMGXMRAIJHGU6V73HQ: ငါသိသောကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုကို dishus http://hashtags.org ဖြစ်သည် - သူတို့သည်လူကြိုက်အများဆုံး hashtags များကိုထည့်သွင်းဖော်ပြသည်။
13:2012 pm မှာဇွန် 4, 48
hash tags တွေအကြောင်းရှင်းပြချက်ကိုဂူဂဲလ်ရေးပါ